အားလုံး မဂ်လာပါသူငယ်ချင်းတို့ရေ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများကိုလည်း ဒီ BLOG လေးနှင့် လေးစားစွာ ဂါဝရ ပြုလျှက် အားလုံးပဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကို၏ကျန်းမာချင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံကြပါစေ...ကျနော် တောင်သာသားလေးမှ မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်......
ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ ကြယ်လေးတွေထဲက အလှဆုံးကြယ်လေးကို မရွေးချယ်နိုင်ပေမဲ့ တောက်ပတဲ့ ကြယ်လေးကို ခူးဆွတ်ယူခွင့်ပြုပါ။ လောကမှာ မိန်းကလေးတွေ အမျာကြီးထဲက အလှဆုံးမိန်းကလေးကို မရွေးချယ်နိုင်ပေမဲ့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ မင်းလေးကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စာကားလုံးလေး ပြောခွင့်ပေးပါ။ (အလွမ်းပြေ နှစ်သိမ့်တဲ့တေး နုပ်ဆတ်တဲ့အနမ်း ထားခဲ့တဲ့အလွမ်းတွေကြားမှာ ကိုယ်ဘယ်လို ချန်ရစ်ရမလဲ မင်းမသိနိုင်ဘူး မသွားပါနဲ့လို့ တစ်ရောက်ကိုတစ်ရောက် တားပိုင်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နှစ်လုံးသားမှာ ဘယ်လောက်အထိနာကျင်ဆို့နင့်နေမလဲ မင်းမသိနိုင်ဘူး နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်ခုရဲ့ အဝေးတနေရာမှာ မင်းဘယ်လိုရပ်တည်နေသလဲ ကိုယ်လည်းမသိနုင်ဘူး ချစ်သူရယ်... ဘယ်ဆီဘယ်မှာမသေချာတဲ့ ဆုံနိုင်ခွင့်တစ်ခုကိုမျှော်ကိုးရင်းနှင့် တွေ့ကြဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခါ နီးစပ်ဖို့ကိုလည်း မစွမ်းနိုင်သေးခင်မှာ ကိုယ့်အတွက်တော့ မင်းဓာတ်ပုံလေးကသာ အလွမ်းပြေစရာပေါ့ ယုံကလေးရယ်..... "ငိုနေသောနှလုံးသား"
Posted by cryingheard at 8:59 PM0comments
သူငယ်ချင်း၊ ဘလော့မိတ်ဆွေအာလုံးကိုနုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော် မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သွားပါပြီ အကယ်များ ဒီဘလော့လေးကိုဆက်ပြီရေးချင်သူများရှိရင် yewin990@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်...
Posted by cryingheard at 6:56 AM0comments
အမေ့ရင်ခွင်ရဲ့ အဝေးမှာ(ရေး …သံစဉ်ဖြိုး)
တစ်ခုမကလိုချင်လို့ တစ်ခုခုပေးတော့မလိုလို ဂရုစိုက်မှုတွေရယ် ..
ခပ်ရင့်ရင့် သန်းခေါင်ကျော်ညတွေရယ် ..
အဲဒါတွေအားလုံးက သမီးဘေးနားမှာ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း လေးနဲ့ဆိုတော့
အမေ့ရင်ခွင်ကို သမီး မတမ်းတပါဘူး
၃၂ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ ရင့်ကျက်မှုမျိူးတွေ လာတောင်းကြတိုင်း
အမေပြောလေ့ရှိတဲ့ ငါ့သမီးကအမေ့မျက်စိထဲမှာ အမြဲကလေးပဲဆိုတဲ့ စကားကိုတော့
အဲဒီ Globalization ကလည်းအသုံးမ၀င်ပါဘူးအမေရာ..
ဒီလိုနဲ့ အမေ့ရင်ခွင်ရဲ့ အဝေးကသမီး
ကြမ်းလိုက် လွမ်းလိုက် လမ်းခရီးမှာ
တစ်ခုခုဆို အမေ့အသံကိုပဲ ပြန်ကြားယောင်ပြီး
စိတ်ဓာတ်ကို အရောင်ပြန်တင်နေရတယ် အမေရယ်။
Posted by cryingheard at 6:54 AM0comments
နင့်အတွက် အချစ်တွေ အန်ချတဲ့
နှလုံးသားလေးနဲ့ ဖတ်ပေးပါ ။
Posted by ရဲဝင်းနိုင် at 8:03 AM0comments
Posted by ရဲဝင်းနိုင် at 7:59 AM0comments
ပစ္စုပ္ပန်ဟာ စိတ်နဲ့ခန္ဒာမှာ ကပ်တယ် ......
Posted by cryingheard at 3:34 PM0comments
Posted by cryingheard at 4:12 PM0comments
poem (1) ကဗျာ (144) ချစ်ရေးချစ်ရာ (1) ပုံပြင် (6) ဗွီဒီယို (7) ဗဟုသုတ (32) ရင်တွင်းဖြစ် (13) သတင်း (40) သိမှတ်ဖွယ်ရာ (30) ဟာသ (4) အတ်ဆေး (5) အမေကဗျာ (4) ဆောင်ပါး (8) နုတ်ဆက်ခြင်း (1)
<br><div class="cryingheard" style="center"><br><a href="http://cryingheard.blogspot.com/"><br><img src="http://4.bp.blogspot.com/-gL_oX9VGiRM/USaMG7T1rQI/AAAAAAAAAik/UNlkX2jeXbA/s1600/coollogo_com-28589877.gif"alt="ငိုနေသောနှလုံးသား" width="220" height="80" /><br></a><br></div><!--end button code box--><br>
ဒီCbox လေးထဲမှာ ခြေရာလေးတွေထားခဲ့ပါ အုံးနော်
တတိယအကြိမ်မြောက်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အမှတ်တရ
17:2:2013 မှာ စတင်သည်
ငိုနေသောနှလုံးသား. Watermark theme. Powered by Blogger.